के हो काठमाडौँमा १५ सय कोरोना संक्रमित भन्दै भाइरल भएको भिडियोको सत्य? – MySansar
Posted on April 13, 2020 by Salokya
फेसबुकमा अहिले एउटा भिडियो भाइरल भएको छ। भिडियोमा एक जना पत्रकारले काठमाडौँमा १५ सय जना कोरोना संक्रमित भएको हुनसक्ने तथ्याङ्क टेकु अस्पतालका प्रमुख डा. सागर राजभण्डारीले खुलासा गरेको दावी गरिएको छ।
के हो यो भिडियोको सत्य? हामीले फ्याक्टचेक गर्ने क्रममा पाएका तथ्य यस्ता छन्।
फेसबुकमा आकस्मिक लाइभ गरेको भन्दै पत्रकार सुविन श्रेष्ठले यो भिडियोमा भनेका छन्, एक हजारभन्दा बढी सेयर भएको यो भिडियोमा वीरगंजमा तीन जनामा कोरोना संक्रमण भएपछि स्थिति अझै भयावह भएको र काठमाडौँमा मात्र १५ सय जना कोरोना संक्रमित हुनसक्ने कुरा टेकु अस्पतालका प्रमुख डा. सागर राजभण्डारीले खुलासा गरे।
अहिलेसम्म नेपालमा १२ जना र काठमाडौँमा तीन जना कोरोना संक्रमित फेला परेको अवस्थामा काठमाडौँमा मात्र १५ सय जना कोरोना संक्रमित हुने यो फेसबुके खुलासाको तथ्य के हो त? हामीले डा. राजभण्डारीसित टेलिफोनमा सम्पर्क गरेर सोध्यौँ।
उनका अनुसार १५ सय जना कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्क प्लानिङका लागि अनुमान गरिएको हो। त्यो काठमाडौँ मात्रको नभएर देशभरको हो। उनले भने, ‘टोटल १५ सय केस भयो भने कति सिरियस हुन्छन्? कतिलाई अस्पताल राख्नुपर्छ? कतिलाई लक्षण देखिन्छ? त्यसको क्यालकुलेसन हो त्यो।’
‘कुन चाहिँ मिडियाले कसरी घुमाएर त्यसलाई राखिदियो’, उनले थपे।
उनले बुझाए, ‘हेल्थ सेक्टरमा प्लानिङ हुन्छ। सय वटा केस भयो भने के गर्ने, १५ सय वटा भयो भने के गर्ने, १५ हजार भयो भने के गर्ने। त्यसैको प्लानिङ हो यो, अरु केही पनि होइन।’
त्यसैले देशभरको १५ सय केसको प्लानिङको तथ्याङ्कलाई गलत बुझेर काठमाडौँमा १५ सय कोरोना संक्रमित हुनसक्ने भन्दै भाइरल बनाइएको भिडियो भ्रामक, तथ्यहीन र गलत छ।
2 thoughts on “के हो काठमाडौँमा १५ सय कोरोना संक्रमित भन्दै भाइरल भएको भिडियोको सत्य?”
Pingback: नआत्तिनुस्, काठमाडौँको अपार्टमेन्टमा तीन जना पोजिटिभ RDT मा भेटिएका हुन्, PCR मा हैन « Mysansar
Pingback: आज फेरि दुई जना पोजिटिभ भेटिए, नेपालमा कूल संख्या १४ पुग्यो « Mysansar